You are here: Home Sub Committee Education Committee Myanmar Instutute of Banking Events
သမ၀ါယမ ဘဏ် လီမိတက် ချေးငွေအာမခံ CGI နှင့် SME ချေးငွေ Product မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ
သဘာဝဘေးသင့်ခဲ့သည့် ကယားပြည်နယ် မော်ချီးဒေသတွင် BFM မှ အသစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အနာဂတ်အလင်းတန်းကျေးရွာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ကယားပြည်နယ် မော်ချီးဒေသတွင် မြေပြိုမှုများကြောင့် သဘာဝဘေးသင့်ခဲ့သည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရန်အတွက် BFM မှ ရွာအသစ်တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာ ဇွန်လ (၆) ရက် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ကျေးရွာအသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့် ကျေးရွာဖွင့်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ BFM မှ အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော ကျေးရွာကို ဒေသခံပြည်သူများက အနာဂတ်အလင်းတန်းရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ အကြီးမားဆုံး အလုပ်အကိုင်ပြပွဲကြီး
ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Myanmar Event Park တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် MyJobs.com.mm မှ ဦးစီးကျင်းပမည့် ရန်ကုန်အလုပ်အကိုင်ပြပွဲကြီးတွင် CB Bank မှပူးပေါင်းပါဝင်၍ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိသူများအား လာရောက်လျှောက်ထားရန် CB Bank မှ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Diploma in Banking (DB)
No. Duration Training/Seminar Topics
1 12 October 2015 - September 2016 (One Year) Diploma in Banking (Full-Time) No.(9)
2 20 October 2014- 14 October 2016 (Two Year) Diploma in Banking (Part-Time) No. (6)
3 19 Octover 2015 - October 2017 (Two Year) Diploma in Banking (Part-Time) No. (7)